Solja Oo Si Adag U Canbaaraysay Suxufiyiinta Xidhan Oo Loo Diiday Daryeel Caafimaad - #1Araweelo News Network https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
Hargeysa(ANN)-Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, ayaa si adag u canbaareeyay xadhiga koox suxufiyiin ah oo maalintii Afraad ku jira Xabsiga, kuwaas oo qaarkood dhaawacyo soo gaadheen markii la xidhayay, isla markaana aan helin daryeel caafimaad.
Qaar ka mid ah Suxufiyiinta xabsiga loo taxaabay ee Somaliland, 13 April 2022, Image Araweelo News Network.
Kooxda Suxufiyiinta ah oo 15 weriye ah, waxay xukuumaddu Sabtidii Makamadda uga qaadatay rumaan muddo shan maalmood ah si xabsiga loogu sii hayo.
Waxaana xaaladda xadhigooda markii labaad maanta ka hadlay Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo si adag u canbaareeyay xadhigaa.
Guddoomiyaha Guddida Difaaca ee SOLJA, Cabdifataax Ismaaciil Mursal oo warbaahinta la hadlay saaka ayaa sheegay in SOLJA ay canbaaraynay xadhiga weriyayaasha.
Cabdifaraax Mursal, waxa uu sheegay in tirada suxufiyiinta xidhan qaarkood dhaawacyo gaadheen, halka mid ka mid ah uu xannuunsanayo, balse loo diiday xaqii ay u lahaayeen in la daryeelo xaaladdooda caafimaad.
“Weriyayaasha qaabka loo qabtay waanu canbaaraynaynaa, iyadoo aan qaarkood xilligaa ku jirrin wax hawlgal ah, qaarna tacadiyo qabaan, waana canbaaraynaynaa nasiibdarada in maanta oo soddon jirsatay tacadiyadaasi dhacaan.”ayuu yidhi.
Muuqaalkan Ka Daawo SOLJA oo Ka Hadlay Suxufiyiinta Xidhan.